Samsung nwere ike ịmalite ekwentị nwere ese foto azụ anọ | Gam akporosis
Huawei P20 Pro kpatara ọgba aghara na ya ngosi ekele ya Mmaji azu igwefoto. N'ihi ya, ọ ghọrọ ihe nlere anya na njedebe dị elu, na ihe ndị ọzọ na-achọ ị imitateomi. LG V40 ga-esote onye nwere ese foto atọ, ụdị ndị ọzọ na-arụkwa na nke a. Samsung kwa, ọ bụ ezie na dị ka asịrị ndị ọhụrụ si kwuo, ụlọ ọrụ Korea ga-aga n'ihu.
N'ihi na ọ bụ kwuru na Samsung na-arụ ọrụ na ekwentị nwere mkpokọta igwefoto azụ anọ. N'ihi ya, ọ ga-abụ n'ezie a ngwaọrụ nke ga-enye ọtụtụ ihe na-ekwu banyere. Ọzọkwa, mmalite ya adịghị ka nke ahụ.
E nwere ụfọdụ asịrị na Ngwaọrụ a sitere na ụlọ ọrụ Korea ga-abịarute tupu njedebe nke afọ a. Yabụ n'ime ọnwa atọ na-esote na 2018, ekwentị Samsung a kwesịrị ịchekwa ụlọ ahịa. Oge na-agwụ.
Ihe a na-amaghị bụ ụdị ekwentị nke ihe nlereanya a ga-abụ. Ọ gaghị adị elu-elu, n'ihi na ebula ụzọ gosipụta ụdị ụdị a niile. Ọ nwere ike ịbụ Samsung Galaxy A9 (2019), nke ekwuru ya na mbụ na ọ ga-enwe ese foto atọ.
Mana, dika a ga-atụ anya ya, anyị enwetabeghị data doro anya na nke a. Ọ bụ asịrị na-agbasa n'ike n'ike na awa ndị ikpeazụ. Mana ụlọ ọrụ ahụ ekwughi, ma enwebeghị nkọwa banyere nkọwa Samsung ekwentị a.
Ihe doro anya bụ na ụlọ ọrụ Korea ga-enye mgbịrịgba n'ahịa ọ ga-ewepụ uche dị ukwuu na ngwaọrụ a. Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na asịrị a bụ eziokwu n'ezie, ma ọ bụ ọ bụrụ na Samsung ga-eweta ekwentị nwere kamera anọ, ihu abụọ na azụ abụọ. Kedu ihe ị chere ga-eme na ụdị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung ọ ga - ewepụta ekwentị nwere kamera azụ anọ?